Xildhibaan Xasan Yare oo ku micneeyay sababta Ra’iisul wasaare loo magacaabi la’yahay arrimo la xiriira muddo kororsi – Kalfadhi
Xildhibaan Xasan Yare oo tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in sababta Madaxweyne Farmaajo uu usoo magacaabi la’yahay Ra’iisul wasaare cusub, ay tahay arrimo lagu raadinayo muddo kororsi.
Guddoonka Golaha Shacabka waxaa ay yiraahdeen xukuumaddii hore waxaa ay ku fashilantahay in ay doorasho qabato, balse maanta haddii shacabka Soomaaliyeed ay yiraahdii keena xukuumaddii doorashada qaban laheyn, lama hayo, ayuu yiri.
“Xukuumaddii ku fashilantahay doorashada, sidii hadda loo dhahayaa wasiiradeeda arrimaha doorashooyinka xoogga ha saaraan, oo wasiir ka tirsan uu u noqonayaa guddoomiyaha guddi ka shaqeeya ka talabixinta doorashooyinka”.
Xildhibaan Xasan Yare, ayaa kamid ah xildhibaannada mucaaradka ku ah dowladda, waxaana uu sheegay in dowladda ay ku fashilantahay shaqaddii loo diray.
25-ka bishii hore, xildhibaanada Golaha Shacabka Somalilya ayaa kalsoonida kala noqday Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, sida uu shaaciyay Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
Xisbiga Wadajir oo heshiiskii Dhuusamareeb 3 ku tilmaamay qabyo ay ka maqanyihiin saamiley kale iyo laba maamul